Facebook မှာ Like များများလိုချင်တယ်ဆိုရင် | အိမ့်မှူးသော်
ဒီတခါတော့ Facebook သုံးတဲ့ ကိုကို မမ များ စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တယ်။ မိမိတင်လိုက်တဲ့ပုံဖြစ်ြဖစ် ၊Status ဖြစ်ဖြစ် Like တွေ အများကြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင် လင့်ပေးပါ့မယ်။ သူက မိမိသူငယ်ချင်းတွေ လာ ပြီး Like လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြား အဲဒီဆိုဒ်လေးကို သုံးတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေ အချင်းချင်း ကို Auto Like ပေးတဲ့ နည်းစနစ်လေး ဖန်တီးထားတာပါ။ မိမိ Facebook ကို Auto Like လုပ်သလို တခြား သူတွေ Facebook ကိုလည်း မိမိက Auto Like ပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
ကဲ နမူနာ ကြည့် ကြည့်နော်.......။
ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဒီလင့်(http://powerlike.org) လေး ကိုအရင်သွားပါ။ ဒီလိုလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Facebook ဖွင့်ထားပါ။ အဲဒီမှာ Get Access Token Here ! ကိုကလစ်ပေးပါ။
အဲဒီမှာ Click Here ကို ကလစ်ပေးပါ။
သူပေးထားတဲ့ Allow ဆိုတာလေးတွေကို အကုန်ကလစ်ပေးပါ။ ပြီးရင် အပေါ်ကလို Success ဆိုတာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ AAAA နဲ့ စာကြောင်းကို & ပုံစံလေး မရောက်ခင်ထိ copy ကူးပါ။
အစနေရာကို ပြန်သွားပါ။ အဲဒီမှာ ခုနက copy ကူးထားတာကို ထည့်ပါ ။ပြီးရင်Enter ခေါက်ပါ။ နည်းနည်းတော့ ကြာမယ်ဗျာ။
အဲလိုပေါ်လာပြီဆိုရင် Powerlike2ကိုကလစ်ပေးပါ။ မိမိ Facebook ကိုသွားပါ။
အဲလိုလေးပေါ်အောင်လုပ်ပြီး အပေါ် url တန်းပေါ်က နောက်ဆုံးမှာ ရှိနေသော ဂဏန်းအားလုံးကို copy ကူးပါ။
ခုနက PowerLike v.2 ဆိုတာကိုသွားပါ။ Post ID မှာ ခုနက copy ကူးထားတာကို paste လုပ်ပါ။ ပြီး၇င် PowerLike buttom ကိုကလစ်ပေးပါ။ ခဏစောင့်ပါ။ ပြီးရင် PowerLike v.1 ကိုသွားပါ။
မိမိရေးထားသောအကြောင်းအရာလေး ပေါ်နေပါ့မယ်။ အဲဒီအောက်နားလေးက PowerLike buttom လေးကို ကလစ်ပေးပါ ။ပြီးပါပြီ။ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် nothateme51@gmail.com မှာ မေးနိုင်ပါတယ်။
Lat Pan 11:34 AM
a ko link ka ma ya buu..pyan tin pay par lat...a ko yal.
Lat Pan 11:52 AM
ma ya phit nay tal...bal lote ya ma la........
powr like ma ya buu pyan tin pay pr naw
justin sun 6:08 AM
Pyaephyoe aung 8:10 PM